'Relief Advance "- ukunqoba esheshayo phezu hemorrhoids
Amafutha suppositories rectal Relief Advance ' "nge kokuqala, ukuhlinzeka umphumela elilungile izimpawu ezithile. Umuthi has ukuphulukiswa anamandla, hemostatics futhi
umphumela anti-inflammatory. Relief Advanced isetshenziselwa ukwelapha hhayi kuphela
hemorrhoids, kodwa futhi nezinye izifo anorectal.
Ngokungafani suppositories, wamafutha singasetshenziswa kokubili ngaphandle ngaphakathi ingquza. Umuthi ubhekana hemorrhoids zangaphandle, njengoba liyithinta ngokuqondile phezu abafanele hemorrhoids. "Inhlangano Yabesimame Advance" wamafutha liphumelele ekwelapheni ISIZINDA yangaphakathi, it ususa ukulunywa nokusha, kunciphisa ubuhlungu. Kusho kahle uphulukisa amanxeba kanye umonakalo ingquza. Ukwakheka kuhlanganisa amafutha ushaka uwoyela isibindi, njengoba kuzo zonke lokhu kusho protivogemorroidalnye umkhiqizi. I Relief Advance iqukethe omunye isithako - benzocaine. Lena izinzwa baqonde izinto ezenzekayo kakhulu, okuyinto ayinakho yi resorptive. izingxenye engeziwe we ekwakhiweni kuthiwa methylparaben,
propylene glycol, Vaseline, monostearate sorbitan, uwoyela amaminerali. Kufaka
petrolatum kwaba nabantu bezizwe ezixubile ibhotela cocoa inikeza ukuthambisa we ingquza. uwoyela Shark isibindi has immunomodulatory nomphumela haemostatic.
Izinkomba ukusetshenziswa zomuthi "Inhlangano Yabesimame Advance" kukhona bangaphandle hemorrhoids yangaphakathi, imifantu futhi izilonda ingquza, ukuguguleka komhlabathi kanye ukulunywa. Umuthi asetshenziswe Ihlahlubo imisebenzi njengoba proctological
imithi ebulala izinzwa.
Izimo thromboembolism, granulocytopenia, ewusana, hypersensitivity ukuba izinto ezithile zomuthi. Wamafutha Kunconywa ngokuqapha e nabancelisayo kanye nabesifazane abakhulelwe. Enquma udokotela uqhuba esekelwe esithombeni emitholampilo ye isifo, ikhumbula lobulukhuni nobungozi. Okuvame kakhulu side effects kukhona ububomvu nokungezwani komzimba. Ukuze udokotela kufanele uxhumane uma ziphikelela noma isimo siba sibi, kanye esimweni ukopha ezinzima.
Ngaphambi kokufaka isicelo namafutha kufanele kube begeza izandla zakho kanye ingquza. Umuthi sisetshenziswa esikhathini ngukuhlwa, kwaba ngukusa emva ukunyakaza wamathumbu. Asincomi isicelo amafutha kane ngosuku. Relief Amakhandlela ' Advance ", kanye lamafutha, kukhona ingxenye ngempela lamafutha benzocaine oShaka isibindi. suppositories Rectal okusebenza ngempumelelo ekwelapheni hemorrhoids yangaphakathi. Amakhandlela babe immunomodulatory nomphumela ukuthambisa phezu ingquza, ukuphulukisa imifantu futhi izilonda, khulula ukuvuvukala hemorrhoids, ayeke ngempumelelo ukopha.
Umuthi isetshenziselwa hemorrhoids yangaphakathi nekuhlanganisa, ukulimala bendunu yezifo ingemuva. Amakhandlela nazo asetshenziswa ngesikhathi rectoscopy futhi nokuvuselelwa emva kokuhlinzwa phezu ingemuva. Izimo babe amakhandlela ziyefana namafutha "Inhlangano Yabesimame Advance". Amakhandlela Bheka ngokucophelela okukhulu okufanele zisetshenziswe abantu kwezinso we wendlala yabesilisa, umfutho ophakeme wegazi, i-hyperthyroidism, futhi iziguli sikashukela mellitus. Asincomi ukusetshenziswa ahlangene amakhandlela 'Relief Advance "futhi tricyclic antidepressant futhi antihypertensives. Ekusebenziseni suppositories rectal kungenzeka komzimba okufana komzimba, ezimweni ezingajwayelekile - ukopha ezinzima. Uma kwenzeka ukuwohloka kwesimiso lesiguli kanye ukubukeka osenyameni evela ingemuva, kufanele ngokushesha kudokotela. Endabeni ka kokungenisa ngephutha izidakamizwa, kutuswa ngokushesha ukufuna usizo kumuntu ofanelekayo.
"Bronhovaksom": izibuyekezo nomuthi
Ukuhambelana "Kagocel" kanye notshwala: Ochwepheshe bathi, imfundo manual
Analog "lioton": yokusetshenziswa, ngempela
Umuthi 'Gipertofort ": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, incazelo kanye nokusungulwa
Medicine "Formidron": yokusetshenziswa
Ukuhlolwa Serological: izinhlobo, ukusetshenziswa
Funda indlela yokutshala kwesokudla scythe
Ethnonym - Iyini? definition
Womoya Kalashnikov othomathikhi - izikhali ngoba uqeqesho combat nezemidlalo sokudubula
"Capulet" (yokudlela, Petersburg): incazelo, oxhumana nabo, imenyu kanye nokubuyekeza
Abasebenzi Ikhaya phambi. abasebenzi Ikhaya phambi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Oleg Lyashko, MP: nempilo yakho, izithombe